Xasan Shiikh oo ereyadii ugu adkaa ku weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta loolanka kula jira | Gaaloos.com
Home » News » Xasan Shiikh oo ereyadii ugu adkaa ku weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta loolanka kula jira
Xasan Shiikh oo ereyadii ugu adkaa ku weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta loolanka kula jira
Madaxweynaha xilka sii haya ee Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa siyaasad salka ku heysa dhinaca ololihiisa doorashada uga faa’iideystay go’aankii shalay ka soo baxay maxkamada caalamiga ah ee ICJ ee ku saabsanaa dacwada badda la xiriirta muranka badda ee Somalia iyo Kenya.
Maxkamadda ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Xasan Shiikh ayaa qaar ka mid ah musharaxiinta loolanka kula jira ku tilmaamay inay yihiin kheyrul Mas’uul, fududeystay mas’uuliyadii ay umadda u qaadeen, mudadii xilka ay hayeen.
Waxaa uu sheegay in madaxdii dowladii KMG aheyd ee heshiiskii MOU la gashay Kenya ay sabab u ahaayeen inay Badda Somalia qeyb ka mid ah muran gasho.
“Waxaan nasiib darro ah in Madaxdii shalay na dayacay ee sida kheyrul Mas’uulinimada ah u sahladay inay Baddeena baxdo ay maanta jaakadaha u soo xirteen inay xukunka dalka qabtaan, qof kasta oo Soomaali ah waa garan karaa waxa ka dhalan kara, marka ay talada qabtaan” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhinaca kale, waxa uu sheegay in xukunka dalka ay doonayaan iney qabtaan shaqsiyaad uu sheegay in shalay iyagoo madax ah ka cararay shacabkooda oo taageersan.
“Kuwa shalay waxaa jira Soomaalida intay ku kalsoonaatay taladii meel cidla ah kaga tagay, iyagoo leh ajnabi ayaan dalka uga cararayaa, dadkii jidadka taagnaana dayacay, maantana soo noqday, iyagoo xil raba ma dad cusub ayay noqdeen”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Hadaladan ayaa noqonaya kuwii ugu adkaa ee Xasan Shiikh ku weeeraro qaar ka mid ah musharaxiinta loolanku ka dhexeeyo ee doorashada hogaanka Somalia.
Title: Xasan Shiikh oo ereyadii ugu adkaa ku weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta loolanka kula jira